ဖိုးစိန် December 14, 2011 at 12:59 PM
ဒီဇင်ဘာဆိုတာ ကျနော့်အတွက်တော့ အမှတ်တရများစွာ..
rose of sharon December 14, 2011 at 1:24 PM
တနှစ်စာအမှတ်တရတွေ နဲ့ ကာရန်မဲ့ညနေလေးကိုဖတ်ပြီး ဘာကိုမှန်းမသိ ရင်ထဲမှာလွမ်းပြီးကျန်ခဲ့တယ်....
Hmoo December 14, 2011 at 3:07 PM
မိုးငွေ့...... December 14, 2011 at 3:53 PM
ကာရံမဲ့ ညနေ ဒီဇင်ဘာညနေ...ပုံဖော်ထားတာလေးလှတယ်...။ ဖတ်ရင်းခံစားမှုကုးဆက်ခံရသလို အသက်ရှူကြပ်လာတယ်....။ သတိရခြင်းတွေ လွမ်းမောခြင်းတွေ....
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) December 14, 2011 at 9:10 PM
အိန္ဒြာ December 14, 2011 at 10:36 PM
ဒုတ်ိယလူ December 14, 2011 at 10:58 PM
အို့ ဒီဇင်ဘာ ကိုယ့် ဒီဇင်ဘာ
ဆောင်မရှီလို့ ပုဆိုးလေး ခြုံကွေးခဲ့ရတာ
Nice & lovely modern essay... Fantastic..!!
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 15, 2011 at 4:37 AM
ဒီလိုနဲ့ အချိန်နာရီအေးစက်စက်နဲ့ နှစ်ပတ်လည်ပြန်ပြီနော်မမ.... ဘဝရဲ့ လွမ်းမောမှုတွေ..များစွာ...များစွာ..ဖြင့်..တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခြင်း..တိုင်ပြန်ပြီမမ..ရေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 15, 2011 at 10:19 AM
December လ ရောက်လာရင် လူက ဝမ်းနည်းရမှာလိုလို ဝမ်းသာရမှာလိုလို ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး ခံစားရတယ်။
နှစ်တစ်နှစ်ကုန်တော့မှာမို့ နှမြောတာလို၊ နှစ်သစ်ရောက်တော့မှာမို့ပျော်မိသလို ဘယ်လိုခံစားချက်မှန်း မသိဘူး
ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ အေးချမ်းမှုကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရတဲ့ နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်တော့ ဝမ်းသာမိတယ်။ နှင်းအတုတွေ အေးချမ်းမှု အတုတွေနဲ့တော့ ဒီဇင်ဘာကို မကြိုဆိုချင်ဘူး။
မြသွေးနီ December 15, 2011 at 1:08 PM
ဒီဇင်ဘာက အမှတ်တရတွေ အပြည့်နဲ့လ...။ ညနေခင်းလေး ပုံဖော်ထားတာ မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်လာ...
နှင်းပွင့်ဝေတဲ့ ဆောင်းတစ်ရက်ကို ပြန်လို့တောင် လွမ်းလာမိတယ်..။
jasmine(တောင်ကြီး) December 15, 2011 at 5:40 PM
မီယာ December 16, 2011 at 4:38 AM
အရင်အတိုင်းပဲ အမရေ... ဖတ်ရတာ လွမ်းတာ
cant read comment
မအိမ်သူ December 16, 2011 at 4:38 PM
နှင်းမဝေတဲ့ ဒီဇင်ဘာညနေခင်း တစ်ခုမှာ ကာရန်မညီတဲ့ မြို့ပြညနေ မြင်ကွင်းလေးတွေကို လွမ်းသလိုဆွေးသလိုနဲ့ ဖတ်သွားတယ်... နှစ်တနှစ်က နှုတ်ဆက်နေပြန်ပြီနော်...
ဇွန်မိုးစက် December 17, 2011 at 5:01 PM
ကာရန်မဲ့ညနေအက်ဆေးကို မိုးအေးအေးမှာ ပျော်ဝင်ခံစားလာဖတ်သွားပါတယ်။
ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာက ဇွန့်အတွက် အတော့်ကို အကုန်အကျများပြီး စိတ်ရှုပ်ရတဲ့လတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် မမရေ။း(
ZZZ December 17, 2011 at 8:16 PM
မသက်ဝေကြီးတစ်ယောက် မိုးရွာတဲ့ ရက်တစ်ရက်မှာ သံရုံးမှာ (စိန့်မာတင်လမ်းကြား) အခွန်သွားဆောင်ပြီး အပြန်မှာ သံရုံးအနီး အော်ချတ်က စတားဘပ် မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်း အော်ချက်မှာ ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ်ကူးအတွက် အပြင်အဆင်တွေကို သတိထားမိပါလိမ်မယ်၊ စင်ကာပူမှာ ပြေးလွှားနေရတဲ့ ဘ၀တွေကို စိတ်ညစ်၊ ငြီးထွားကာ သွယ်ဝိုက်ရေးထားတဲ့ ပို.စ်တစ်ခုလို. ခံစားမိပါတယ်၊